Imibuzo evame ukubuzwa - Shanghai Langyi Functional Materials Co., Ltd.
Yini i-antibacterial? Yini indlela yokusebenza ye-ejenti elwa namagciwane?
I-Antibacterial yigama elijwayelekile, kufaka phakathi inzalo, inzalo, ukubulala amagciwane, i-bacteriostasis, isikhutha, ukugqwala, njalonjalo. Inqubo yokubulala amabhaktheriya ngezindlela zamakhemikhali noma zomzimba noma ukuvimbela ukukhula, ukuzala kanye nokusebenza kwamagciwane kubizwa ngokuthi inzalo kanye ne-bacteriostasis.
Ngawo-1960, abantu basebenzise kakhulu ama-organic antibacterial agents ukukhiqiza izindwangu zokulwa namagciwane. Ngokuthuthuka okuphumelelayo kwama-antibacterial agents angajwayelekile ngo-1984, ukuqeda ama-antibacterial kuthuthukiswe ngokushesha, okwenza ama-antibacterial agents angasetshenziswanga kuphela ku-fiber nezindwangu, kodwa futhi asetshenziswa kupulasitiki, izinto zokwakha neminye imikhiqizo.
Ekhulwini lama-21, ngokufika komphakathi osugugile, isibalo sabantu asebekhulile abalele embhedeni kanye nalabo abahlanza impilo emakhaya sikhuphuke kancane kancane, futhi nesidingo semikhiqizo yokunakekela asebekhulile ukuvimbela izilonda zokulala naso sikhuphukile.
Ngenxa yoshintsho olusuka emphakathini oluhlose ukukhiqiza luye koluthambekele empilweni, kuzoba yisihloko esibalulekile esikhathini esizayo ukuthuthukisa nokucwaninga ngemikhiqizo ezuzisa impilo yabantu kanye nemvelo yomhlaba.
Njengamanje, kunezinqubo ezintathu eziyinhloko zokulwa namagciwane zemithi elwa namagciwane: ukukhishwa okulawulwayo, inqubo yokuzivuselela kanye nesithiyo noma umphumela wokuvimba.
Ukusetshenziswa kwamanje kwama-antimicrobial afanele kuseduze nokuphepha nokunethezeka kohlelo lokusebenza, kanye nokuqina kokusebenza. Ngokwenziwa ngcono kokuqwashisa kwabantu ngokuvikelwa kwemvelo, ama-antimicrobial agents ahehe ukunakwa okuningi, okufana ne-chitosan ne-chitin, njll. Nokho, ama-antimicrobial agents anemaphutha asobala ekumelaneni nokushisa nokuqina kwama-antibacterial. Yize ama-antimicrobial organic esetshenziswa kabanzi, anokukhubazeka okuthile ekumelaneni nokushisa, ukukhishwa kokuphepha, ukumelana nezidakamizwa nokunye. Inorganic ejenti elwa namagciwane uhlobo ejenti elwa namagciwane elisetshenziswa kakhulu emakethe, ubuchwepheshe buvuthiwe ngokwengeziwe, futhi banezinzuzo ezisobala ekumelaneni nokushisa, ukuphepha, ukusebenza kwesikhathi eside nezinye izici, ukulindeleka kokusebenza kwemakethe okuhle kakhulu.
IShanghai Langyi Functional Materials Co., Ltd. igxile ekuhlinzekeni izixazululo ezikhethekile ezisebenzayo zezixazululo zezinto ze-polymer ezisuselwa ku-ester, futhi iyaqhubeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo ezihlukaniswe impilo yonke zomsebenzi wamakhasimende we-ester based polymer chain chain. Sithuthukise ngokuzimela i-AntibacMax®, i-ejenti elwa namagciwane lensimbi engaphili, ekuphenduleni izitayela zemakethe nezimfuno ezintsha zamakhasimende. I-AntibacMax®ingakhipha ngokuqinile isiliva, i-zinc, ithusi namanye ama-ion ama-antibacterial, futhi inomphumela omuhle we-bacteriostatic ku-fungus ebanzi ebanzi. Ithobela ingqikithi yefilosofi yendabuko yamaShayina - "ubunye benembeza, ulwazi nokwenza", inkampani inikeza imikhiqizo, izinsizakalo kanye nempendulo yenani kumakhasimende, abasebenzi, abaninimasheya, umphakathi kanye nabanye ababambiqhaza.
Wazi kangakanani ngama-antimicrobial angaphili?
Eminyakeni yamuva nje, kuye kwaba nomkhuba owandayo wezenzakalo ezimbi ezibangelwa ama-microorganisms. Ngokuqonda kwethu, izinhlobo eziningi zamagciwane zisendlini yangasese, njenge-E.coli, iStaphylococcus aureus, i-staphylococcus white, i-bacillus subtilis, i-tetralococcus, njll. Izinto eziningi ekhaya kulula ukuzalanisa amabhaktheriya. Ngakho-ke, ukuthi ungayithuthukisa kanjani le nkinga incike kuma-antibacterial agent.
Ngokwemvelo, kunezinto eziningi ezinomsebenzi omuhle we-bactericidal noma we-inhibitory, njengamanye ama-organic compounds namaqembu athile, ezinye izinto zensimbi ezingaphili kanye namakhemikhali azo, amanye amaminerali nezinto zemvelo. Kepha njengamanje, into elwa namagciwane isho okokusebenza okunamandla okuvimbela noma okubulala amabhaktheriya ngokufaka izinto ezithile ezibulala amagciwane (ezaziwa njenge-antibacterial agent), njengeplastiki elwa namagciwane, i-fibre elwa namagciwane nendwangu, i-ceramics elwa namagciwane, insimbi elwa namagciwane izinto zokwakha.
A) Indlela yokusabela kokuthintana ne-iron ion
Ukuphendula kokuxhumana kubangela ukubhujiswa noma ukukhubazeka kokusebenza kwezingxenye ezivamile ze-microorganism. Lapho i-ion yesiliva ifinyelela kulwelwesi lwe-microorganism, idonswa ngamandla we-coulomb wecala elibi, futhi isaka lesiliva lingena esitokisini, liphendula neqembu le -SH, lenze ukuthi iphrotheni ligodle futhi libhubhise umsebenzi we-synthase.
B) Indlela yokwenza kusebenze okusebenzayo
Ezinye izinto ezilandela umkhondo zensimbi zingaxhuma noma zithinte amaprotheni, ama-fatty acids angenamafutha kanye nama-glycosides kumaseli wegciwane, aqeda ukwakheka kwawo okujwayelekile, futhi ngaleyo ndlela abenze bafe noma balahlekelwe amandla abo okukhula.
C) Indlela yokulungisa ye-Cationic
Ama-bacteria akhokhiswe kabi akhangwa kuma-cations ezintweni zokulwa namagciwane, ezivimbela ukuhamba kwazo mahhala futhi zivimbele amakhono azo okuphefumula, okwenza lokho kube "ukuthintana nokufa".
D) Indlela yokulimaza okuqukethwe kwamaseli, ama-enzyme, amaprotheni nama-nucleic acid
Ama-antimicrobials asabela nge-RNA kanye ne-DNA ukuvimbela ukubola nokuzala.
Ihlose ukuthambekela kwemakethe nokufunwa kwamakhasimende amasha, iShanghai Langyis Functional Materials Co., Ltd. yathuthukisa ngokuzimela i-AntibacMax®, i-ejenti elwa namagciwane lensimbi engaphili. I-AntibacMax®ingakhipha ngokuqinile isiliva, i-zinc, ithusi namanye ama-ion wokulwa namagciwane, futhi inomphumela omuhle wokulwa namagciwane ku-fungus ebanzi ebanzi. Uma kuqhathaniswa nama-organic antimicrobial agents, i-AntibacMax® inokumelana kangcono nokushisa, ukukhishwa kwesikhathi eside, ukuqina kwamakhemikhali nokuphepha.
Yini i-masterbatch epulasitiki elwa namagciwane?
I-antibacterial plastic masterbatch yinto entsha elwa namagciwane eyenziwe futhi yenziwe ubuchwepheshe obukhethekile. Isetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo yepulasitiki, ayinabungozi emzimbeni womuntu futhi inomphumela wokulwa namagciwane kuzo zonke izinhlobo zamagciwane ayingozi nesikhunta.
Ngemuva kokubumba igalelo, ukubunjwa kwengcindezi, ukubunjwa kokushaywa nokunye ukucubungula, i-masterbatch eplastiki elwa namagciwane ikhiqiza izinto zokupakisha zokudla, izinto zokwelashwa, izinto zasendlini, izinto zokuhlobisa ngaphakathi zezimoto, izimpahla ezikhethekile zekota, izimpahla zezingane nezinye izinto zokusetshenziswa kwansuku zonke nezimpahla zezimboni ezinomsebenzi wokulwa namagciwane .
I-resin esebenzayo: i-PE, i-PP, i-PC, i-PET, i-PS, i-PU, i-ABS, i-SAN, i-TPU, i-TPE (i-anti-bacterial, i-anti-iphunga, umswakama, i-anion, ukuvikelwa kwe-microwave, umsebenzi wokusabalalisa we-infrared, i-fiber spinning), imishini ekhethekile.
I-masterbatch epulasitiki elwa namagciwane
Izici: abukho ubuthi ngomlomo, akukho ukucasuka esikhunjeni, abukho ubuthi emvelweni; Awekho ama-hormone ezemvelo; Qinisekisa ama-anti-bacteria, umphumela wokulwa nesikhunta; Ngokusebenza kahle okuphezulu nobubanzi obubanzi bama-anti-bacteria, anti-isikhunta, anti-ulwelwe ukusebenza; Umphumela wokuhlala ulwa namagciwane; Ukukhanya okuhle nokuphepha kokushisa;
Isicelo: imikhiqizo kagesi, izidingo zansuku zonke, izinto zokwelashwa, izimpahla zezingane, izingxenye zezimoto, izinto zokupakisha ukudla, izimpahla ezikhethekile zekota, njll.
IShanghai Langyi Functional Materials Co., Ltd. igxile ekunikezeni izixazululo ezikhethekile ezisebenzayo zezisombululo zezinto ze-polymer ezisuselwa ku-ester, futhi iyaqhubeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo ezihlukaniswe impilo yonke zomjikelezo wamakhasimende we-ester based polymer chain chain. ULangyi ubheka "ukuqanjwa kwezobuchwepheshe" njengesisekelo sokuthuthukiswa kwamabhizinisi futhi ukhuthaza ukwakhiwa okuhlanganisiwe kwezigwegwe. Sitshala ngaphezu kuka-10% wenzuzo yethu ku-R & D minyaka yonke, futhi sakha ithimba le-R & D elinamandla amakhulu ngezobuchwepheshe kanye neFudan University, iDonghua University namanye amanyuvesi. Sizuze iziqu eziningi ezihlonishwayo ezifana ne- "Shanghai Advanced Private Enterprise", "Shanghai High-tech Enterprise", "i-Shanghai Specialized New Enterprise and Medium-Enterprise" njalonjalo.
Umenzeli wePolymeric Antihydrolysis, I-Masterbatch elwa namagciwane, Antibacterial Indwangu Nonwoven, Intambo elwa namagciwane, I-Masterbatch Yokuqothula Elwa Namagciwane, Elwa namagciwane Electret Masterbatch,